Shiinaha Liquid lipstick iyo liner liner dhigay jumlada liner caadada jumlada iyo bushimaha dhalaalaya set bushimaha matte sumadda gaarka ah lipstick bush gloss kit kit iyo alaab-qeybiyeyaasha Qurxinta Iris
Dheecaannada dareeraha ah iyo kuwa liner-biyoodka ah waxay dejiyaan jumlada liner-biyoodka caadada ah iyo bushimaha dhalaalaya ee loo dejiyo xirmada bushimaha matte calaamadda khaaska ah ee lipstick
Dahaarka bushimaha kareemka ah iyo lipstick-ga dareeraha ah, waa ciyaar aad u fiican. Khudaar iyo naxariis la’aan, 65 midabo oo la xusho.
Qiimaha EXW: 1.88 ~ 2.99 USD
Xargaha bushimaha waa kuwo siman oo xiiran, way fududahay in la mariyo bushimahaaga. Dheecaanka dareeraha ah ee 'Matte lipstick' waa kuwo muddo dheer soconaya oo aan biyuhu xireynin.
Ku soo bixi baarkaaga garaac midabkiisu hodan yahay. U adeegso shaashadda bushimaha kareemka leh si aad bushimahaaga bushimaha ugu fiican u dhammaystirto marka hore, 65 midabbo kala duwan oo xulashadaada ah kuna dar dusha, bushimahaaga ka dhig mid dhalaalaya oo soo jiidasho leh.
Magaca Shayga Qalabka Lipstick & Liish liner
5. Biyo la’aan iyo waaritaan dheer
Hore: bushimaha jumlada ah ee loo yaqaan 'logo' jumlada jilicsan ee jilicsan ee calaamadda khaaska ah ee lipstick low moq makeup bush
Xiga: Matte calaamadda dheecaanka khafiifka ah ee gaarka loo leeyahay ayaa sameeya mid kuu gaar ah oo iibiya lipstick vegan jumlo ah
lipstick caadadii iyo bushimaha gogosha go'an
bushimaha dhalaalaya iyo gogosha gogosha
bushimaha dhalaalaya iyo gogosha xargaha
xirmada bushimaha dhalaalaya
bushimo bushimo calaamadee calaasadeed gaar ah
bushimaha safka ah iyo gogol xaadhka bushimaha
bushimaha xargaha bushimaha dhejiska dhalaalaya
bushinta dhejiska gogosha gogosha
lipstick dareere ah iyo gogosha bushimaha